Daawo: Xildhibaan Aadan Barre Ducaale oo si kulul uga hadlay howlgalada ciidamada Kenya ee Xaafada Islii – idalenews.com
Xildhibaan Aadan Barre Ducaale oo laga soo doorto magaalada Gaarisa ee dalka Kenya ayaa khudbad ay aad ugu riyaaqeen Soomaalida qaxootiga & Soomaalida u dhalatey dalka Kenya u jeediyey dadweyne aad ugu careysan dhibaatadii ciidamada Kenya ay u geysteen dadkii Soomaaliyeed, waxuu fariin u diray dowlada Kenya iyo dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Islii.
Dowlada Kenya ayuu sheegay in aan looga hari dooni waxyeelaynta dadka Soomaaliyeed, ayna leeyihiin xaqa dadka kale ee ka soo jeeda Kenya ay leeyihiin. halka dhanka kale Soomaalidana u sheegay in ay si wadajir ah isaga kaashadaaan dadka ku soo dhex dhuumanaaaya ee waxyeeleynaaya noloshooda iyo ganacsigooda.. Xildhibaan Aadan Barre Ducaale ayaa yiri “Wiilaha Soomaaliyeed ee dhibaatada ka wada gudaha Islii isla markaasna sharaf dilay diinta Islaamka, qaraxyada la jooga Isliii ha tagee meelaha kale ee dalka Kenya”.
Xildhibaannada Soomaalida ah ee ku jira baarlamaanka Kenya ayaa shalay oo la kulmay bulshada Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, iyadoo kulankaas looga hadlay sidii looga hortegi lahaa kuwa dhibaatooyinka ka dhex-geysanaya Soomaaliya.
Mudanayaasha kulankan xaadiray ayaa waxay ahaayeen 31-xildhibaan sida uu sheegay mid ka mid ah mudanayaasha, iyadoo uu noqonayo kulankan kii ugu horreeyay noociisa oo ka dhaca Nairobi.
Aadan Barre Ducaale oo hoggaaminayay xildhibaannada la kulmay Soomaalida Islii ayaa ku gooddiyay in haddii ay Soomaali yihiin ay taageerada kala noqonayaan xisbiga talada dalkaas haya, haddii aan la joojin dhibaatooyinka lagu hayo dadka Soomaaliyeed.
Xildhibaanka oo hadalladiisu ay u ekaayeen kuwo ay caro ka buuxdo ayaa intaas ku daray: “Innagu marba ma ogolaanayno in shacabka Soomaaliyeed dadka si gooni ah loo faruuqo.”
Guddoomiyaha Nairobi, Njoroge Ndirangu ayaa dhankiisa sheegay in howgalladu ay sii socon doonaan, isagoo yiri: “Innagu ma beegsanayno Islii oo keliya. Howlgalkan waa mid ka socda Nairobi oo dhan, lana billaabay bishii Feberaayo ee sannadkan.”
Ugu dambeyn, wararka ka imaanaya saakay xaafadda Islii ayaa sheegaya in wixii ka dambeeyay 10:00 habeenimo ee xalay aysan jirin ciidammo booliis ah oo lagu arkay gudaha xaafaddaas oo ay Soomaalidu aad u daggan yihiin.
Akhriso: War Murtiyeedkii Ka soo Baxay Kulankii Beesha Hubeer Ee Ku yeesheen Magaaladda Minneapolis Ee Dalka Mareykanka.